सुरक्षामा गम्भीर छैनन् निकाय ? | Epradesh Today
Homeफिचरसुरक्षामा गम्भीर छैनन् निकाय ?
सुरक्षामा गम्भीर छैनन् निकाय ?
कार्यालय परिसरबाटै मोटरसाइकल चोरी …
दाङ, ११ असोज । अनन्त गौतम तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका कार्यरत अधिकृत हुन् । गौतम बुधबार बिहान १० बजे नै नियमित कामकाजमै आए । कार्यालयको परिसरमा अघिका दिनझैँ बुधबार पनि उनले मोटरसाइकल पार्किङ गरे र नियमित काममा खटिए ।
गौतमले करिब ३/४ घण्टापछि कार्यालयबाट खाजा खान निस्किए । पार्किङ गरिराखेको ठाउँमा मोटरसाइकल खोज्दा उनले मोटरसाइकल भेटाउन सकेनन् । त्यति बेलासम्म उनको मोटरसाइकल चोरी भइसकेको थियो । कार्यालय परिसरमा पार्किङ गरिराखेको मोटरसाइकल नभएपछि कार्यालयमै खैला–बैला मच्चियो ।
बुधबार तुलसीपुर उपमहानगरको कार्यालय परिसरबाट हराएको मोटरसाइकल कसले लगेको छ भन्ने शुक्रबारसम्म पनि पत्ता लाग्न सकेको छैन् । उपमहानगरपालिकाको गेटमा सुरक्षाका लागि सेक्युरिटी पनि खटाइएको छ ।
सिसी टिभी फुटेजमा चोरी हुनुभन्दा १० मिनेट अघिसम्म कार्यालय परिसरमा प्रहरी अधिकृतसहितको टोली पनि थियो । भने नगरको आन्तरिक सुरक्षा २४ घण्टा रहदै आएको छ । कार्यालय परिसरबाटै दिनदाहाडै मोटरसाइकल चोरी भएपछि अहिले सेक्युरिटी के का लागि भन्ने बहस पनि हुन थालेको छ ।
सुरक्षाका लागि खटिएकाहरु कर्मचारीको लापरवाहीकै कारण मोटरसाइकल चोरी भएको गौतमले बताए । ‘गेटमा राखिएका सेक्युरिटीको काम नै के त ? सवारी चेकिङमा कडाइ गर्नुपथ्र्यो तर उहाँहरुको पनि ध्यान पुग्न सकेन्’ उनले भने ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालय परिसरबाटै बुधबार दिउँसो रा ५ प ३८२५ नम्बरको मोटरसाइकल हराएको हो । कार्यालय परिसरमा पार्किङ गरिराखेको कर्मचारीको मोटरसाइकल हराएपछि अहिले विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेका छन् । सरकारी कार्यालयबाटै कर्मचारीको मोटरसाइकल चोरी भएपछि अन्य ठाउँमा कसरी सुरक्षित महशुस गर्ने ?
उपमहानगरपालिकामा सुरक्षाका लागि अहिले तीनजना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् तर उक्त दिन कार्यालयमा सेक्युरिटीकै लापरबाहीका कारण कार्यालय परिसरबाटै त्यो पनि दिनदाहाडै मोटरसाइकल चोरी भएको छ ।
कार्यालयमा नियमित जाँच नभएपनि शंका लागेमा जाँचमा कडाई गरिने गरेको कार्यालयका सेक्युरिटी प्रमुख तेजबहादुर बस्नेतले बताए । ‘हामीहरुले जाँचमा कडाई नै गरेका छौँ खै त्यो दिन कसरी चोरी भयो ?’
उनले भने ‘कार्यालयमा आउने सबैको नामदर्ता गर्ने सिस्टम चलाउभन्दा पनि उपमहानगरले हाम्रो कुरा सुनेन्, अहिले अब रेकर्ड राख्न शुरु गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ, अब तुरुन्तै व्यवस्था गछौँ ।’
जिल्लामा पछिल्लो समय सुरक्षालाई चुनौति दिने गरी मोटरसाइकल चोरी गर्ने गिरोह नै सक्रिय भएको छ । दाङमा पछिल्लो समय मोटरसाइकल चोरी हुनेक्रम बढ्दै जाँदा सुरक्षामा चुनौती थपिएको प्रहरीले बताएको छ ।
यसैबीच प्रहरीले शुक्रबार मात्रै मोटरसाइकल चोरी गर्ने तीनजनालाई लमहीबाट पक्राउ गरेको छ । असोज ४ गते लमही नगरपालिका–५ का प्रदिप परियारको रा १ प ३८६८ नम्बरको मोटरसाइकल चोरी गरेको आरोपमा तीनजनालाई पक्राउ गरेको हो ।
पक्राउ पर्नेहरुमा लमही नगरपालिका–४ अर्नहवाका सम्मान पुन, सोही ठाउँका प्रदिप चौधरी र लमही–५ आदर्श टोलका अनिलसिंह बस्नेत रहेका छन् । उनीहरुलाई मोटरसाइकल सहित पक्राउ परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी प्रवक्ता विनोद विक्रम शाहले जानकारी दिए ।
‘मोटरसाइकल चोरी गर्ने गिरोह नै सक्रियछ कि भनेर प्रहरीले अनुुसन्धान गरिरहेको छ’ उनले भने ‘अहिले भन्न मिल्ने अवस्था छैन्, जे होस् हराएका मोटरसाइकल प्रहरीले फेला पार्नेक्रम पनि बढिरहेको छ ।’
प्रहरीले भदौ ५ गते रा ४ प १३२० नम्बरको मोटर–साइकलसहित रोल्पाको रुण्टीगढी गाउँपालिकाका–१६ वर्षिय प्रविणकुमार बस्नेतलाई पक्राउ गरेको थियो । जिल्लामा एकपछि अर्को गर्दै मोटरसाइकल चोरीका घटना बढ्न थालेपछि सुरक्षामाथि नै नागरिकले प्रश्न गर्न थालेका छन् । मोटरसाइकल चोरीका घटना बढ्दै जाँदा पनि चोरी गर्ने गिरोहको पहिचान हुन सकेको छैन् ।